ချင်း(သို.) ဂျင်း Ginger ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ချင်း(သို.) ဂျင်း Ginger
ချင်းတက်လိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့..Ginger Roots မှာ...ကာဗွန်ပိာုက်ဒရိတ် ၁၇.၇၇ %၊ သကြား ၁.၇% ၊ အမျှင်ဓါတ် ၂% ၊ပရိုတင်း ၁.၈၂ နဲ.အဆီ ၀.၇၅%
သို.သောနာကျင်မှုဝေဒနာတွေကို ၇၅% ထိသက်သာစေတဲ့အပြင်..
ထည့်ခပ်သုံးစွဲတာကိုတော့..ဗီယက်နမ်ပာင်းပွဲတစ်ချို.မှာတွေ.မြင်လေ့လာဖူးပါတယ်...သနပ်လိုပုံစံလုပ်ထားတဲ့ချင်းနုနုကိုစိမ်ထားတဲ့အသင့်သုံး( fast food ) ကိုတော့..တရုတ်၊ ကိုးရီးယား ၊ ဂျပန်စတဲ့နိူင်ငံတွေမှာ..Sea foods ပာင်းပွဲတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုတာကိုတွေ.ရပြီး..ချင်းပြုတ်ရည်၊ ဖာလာစေ့ပါတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတော့...အိန္ဒိယနွယ်ဝင်..ပိာန္ဒူဘာသာတွေရဲ.ရိုးရာချင်းလက်ဖက်ရည်အဖြစ်...ရိုးရာပွဲတော်များမှာ..တည်ခင်းဧည့်ခံတာကိုခုချိန်ထိတွေ.နေရပါတယ်။